Chọpụta otu ị ga - esi chọọ ụlọ gị mma site na mmanya vaịn | Bezzia
Susana Garcia | 26/04/2021 20:00 | .Chọ Mma, Trendschọ mma nke ọma
La agwakọta ụdị mgbe ị na-achọ mma Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma anyị nwere ike ime, n'ihi na ọ na-enye anyị ọtụtụ nnwere onwe mgbe a bịara n'ịchọta iberibe na mmụọ nsọ. Ọ bụkwa eziokwu na ụdị dị iche iche na-adị n'otu mgbe ụfọdụ ma ọ na-esiri ike nghọta otu na-enweghị nke ọzọ. Iji maa atụ, ụdị mkpụrụ vaịn a na-eji agụ mmanya dị ugbu a na ndị ọzọ dịka ụlọ ọlụ ma ọ bụ chicho. Na nke a, anyị ga-ahụ otu esi achọ mma na ụdị ejiji boho.
El vintage boho ịke eji amara na ịdị mfe nke ụdị bohemia tinyere mmetụ pụrụ iche nke mpempe akwụkwọ mmanya nwere akụkọ ihe mere eme na agwa. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ otu n'ime ngwakọta kachasị amasị anyị n'ihi na anyị nwere ike ịmepụta gburugburu nwere ọtụtụ ụdị mmadụ yana ụdị enweghị atụ.
1 Agba dị na ụwa boho
2 Osisi dị oké mkpa
3 The osisi aka
4 Mkpụrụ vaịn ndị a
5 Anọla na ngagharị iji chọọ mma
Agba dị na ụwa boho
Ikekwe ihe kachasị sie ike ịgwakọta ma jikọta na ụdị ejiji nke boho bụ agba, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị ngwakọta. Na ụdị Nordic, a na-eji ọtụtụ ụda dị iche iche eme ihe na n'echiche a ọ dị mfe, mana na ụwa boho a na-achọkarị ụdị ejiji na-eji ụda olu na-adịkarị ọkụ. Ha nwere ike agwakọta ụda ụwa, ụfọdụ uhie, agba aja aja, oroma na ọbụna acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ihe niile dabere na ọnụ ọgụgụ agba anyị chọrọ itinye. Dika enwere otutu nnwere onwe, anyi nwere ike iji otutu olu di iche iche ma nwe obi uto. N'ezie, anyị ga-agbapụrịrị gabiga ókè, n'ihi na ọ bụrụ na anyị nwere agba buru oke ibu, anyị nwere ike ịgwụgwụ n'ikpeazụ. Jiri ezigbo ụda dị ka agba aja aja na agba ọcha na-agbakwunye na ha tinye textiles na mbipụta na agba mara mma.
Osisi dị oké mkpa
Osisi bụ ezigbo mgbakwunye na ihe ndozi ọ bụla na ụlọ, mana n'ụdị vinteji boho ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile. You nwere ike iji ite dị iche iche, ụfọdụ nwere ụdị mkpụrụ vaịn, dị ka terra cotta, iji jikọta ụdị. Nnukwu osisi ma ọ bụ cacti dị mma. I nwekwara ike kpọgidere ụfọdụ osisi na ite crochet, nke ghọghachila ejiji ma dị mma maka ịgwakọta ụdị ndị a. Nwere ike ịmepụta akuku jupụtara na osisi.
The osisi aka
In boho chic anyị nwere mmetụ nkịtị mana ọ dịkwa a echiche nke ndu ndi bohemia, nke njem na omenala ndị ọzọ nwere ohere ha. Ọ bụ ya mere n'ọtụtụ oge, anyị nwere ike ịhụ ibe sitere na ọdịbendị ndị ọzọ n'ụdị a. Ọ bụrụ na ịhọrọ ihe Devid agụghị ndị gbara, ị ga-enweta mmetụ zuru oke. Atụla egwu ịgwakọta ma họrọ iberibe ị masịrị, ọbụlagodi na ha abụghị ihe na-ewu ewu, n'ihi na nke a bụ mmụọ nke ụdị a.
Mkpụrụ vaịn ndị a
E nwere ọtụtụ echiche dị iche iche n'ụdị vinteji, mana karịa ihe niile bụ eziokwu na nke ochie, a na-achọgharịbeghị ma ọ bụ na ọ bụghị naanị otu ihe ochie. Maka nke a ị nwere ike ịchọ na metụtara, ebe ọ bụ na n'ime ha ị nwere ike ịchọta iberibe na-atọ ụtọ, na akụkọ ihe mere eme ha na ụdị mmadụ ha. Họrọ iberibe nke pụrụ iche bụ kpochapụwo na ụdị boho, ebe ọ bụ na ịchọghị ịnweta ụlọ dịka nke onye ọ bụla, dabere na ọnọdụ, mana ihe pụrụ iche na iche.
Anọla na ngagharị iji chọọ mma
na vinteji boho ịke iberibe ga-abụ ọpụrụiche, ya mere o yikarịrị ka anyị agaghị achọta ihe niile n'otu oge. Ọ dị mkpa iwepụta oge ịhọrọ iberibe na nkọwa, na-achọ ihe na-amasị anyị ịmepụta ọnọdụ zuru oke n'ụlọ anyị. Ozugbo ị nwere arịa ụlọ, ị nwere ike were oge ịchọ obere nkọwa, site na vases ruo textiles na enyo. Enweghị ọsọ ọ bụla mgbe a bịara n'ịchọta mkpụrụ osisi vaịn maka na ihe anyị chọrọ anaghị apụta na mbụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » .Chọ Mma » Esi icho mma na vinteji boho ịke